Wafdi Ballaaran oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha baarlamanka Federaalka Soomaaliya Max’ed Shiikh Cusmaan Jawaari ayaa gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan halkaasoo si diiran loogu soo dhoweeyey.
Waxaa ka mid ah wafdigaasi Guddoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xumad oo booqasho ku jooga Soomaaliya, Taliyaha guud ee Ciidanka AMISOM xubno ka tirsan Golayaasha ka la duwan ee Dowladda iyo masuuliyiin kale.
Garoonka dayuuradaha Magaalada Baladweyne ayaa waxaa ku soo dhaweeyey Mas’uuliyiin maamulka Hirshabeele oo uu ugu horeeyo Madaxweyne Maxed Cabdi Waare iyo Maamulka gobolka Hiiraan, waxaana loo gudbiyay gudaha magaalada Baladweyne.
Ujeedada socdaalka wafdigan ayaa ah sidii guddoomiyaha baarlamanka Jabuuti iyo wafdigiisa ay u soo booqan lahaayeen Ciidamada Jabuuti ee ku sugan Gobolka Hiiraan
Munaasabad soo dhoweyn ah oo ka dhacday xarunta Maamulka gobolka hiiraan ayaa waxaa ka qeyb galay ugaaska beesha Xawaadle Ugaaska Khaliif iyo masuuliyiin fara badan.
Wafdiga Guddoomiyaha Baarlamanaka Jabuuti inta uu joogo Soomaaliya ayaa dib uga soo laabn doona Muqdisho waxaana uu ka qeybgalaya shirka xildhibaanada Golaha shacabka halkaasoo uu khudbad u kaga hadlayo xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka jeedin doono.